Mhepo Inonatsa ne Disinfection Rinoshanda fekitori uye vanotengesa | Mhepo
Vanonatsa Mhepo neDisinfec ...
Modular Mhepo-yakanyorova Mupumburu C ...
CVE Series Permanent Magineti ...
Muromo Girazi Wool Sandwich P ...
Molecular kutyora tekinoroji mhepo disinfection mhando yekunatsa sterilization rate iri kusvika 99,9%. Yakachena Mhepo Dhirivhari Rate (CADR): 480m3 / h, inokodzera nzvimbo 40-60m2. Budirira kubvisa kunhuhwira uye kunatsa PM2.5, haze, mukume, guruva, VOCs. Iyo yekunatsa mweya yakaedzwa munzvimbo ye microbiology yekuona nzvimbo. Mwero wekuuraya hutachiona hweH1N1 nehutachiona hweH3N2 ungangoita 99.9%.
Molecular Kuputsa Tekinoroji
Haasi Ose Anonatsa Mhepo Ane A Disinfection Rinoshanda
Uraya hutachiona uye hutachiona
Utachiona hutachiona> 99%
Kuora utsi hwehupenyu
Iyo inogona kunyatso kuodza nicotine (yakagadzirwa nefodya) uye kusvibisa utsi hwehupenyu zvinosvibisa.
Kutsemuka formaldehyde, benzene
Kutsemura zvinhu zvinokuvadza zvakaita benzene uye benzene akateedzana, magasi anokuvadza anofarira formaldehyde uye aldehyde ketone inogadzirwa kubva mumba kushongedza pasina kusvibiswa kwechipiri.
Kana mweya wakasviba ukapinda musimboti wechinhu chinonatsa, iyo yakasimba simba ions inogadzirwa neiyo yakasimba simba mapuru mune yepakati chikamu chinokanganisa mamorekuru zvisungo zvezvinosvibisa, zvichikonzera CC uye CH zvisungo izvo zvinoumba mamorekuru zvisungo zveanonyanya kukuvadza microorganisms uye magasi anotsemuka, saka utachiona hunokuvadza hunourawa sezvo DNA yavo ichiparadzwa uye magasi anokuvadza akadai seFormaldehyde (HCHO) neBenzene (C6H6) akatsemurwa kuita CO2 neH2O.
Dynamic disinfection uye kuchenesa kunopa kuenderera kwakakwira kuita pakuuraya mabhakitiriya nemavirusi, kutsemura magasi anokuvadza uye kuora hutsi hutete.
Hapana zvakasara zvechipiri zvinosvibisa makateti mashoma kushushikana uye kuchengetedzwa kuri nani.
Zvakatipoteredza zvine hushamwari
Kuramba kushoma, kuderera kwekuchengetedza, kurasa kwakaderera, kushandiswa kwesimba kwesimba.
Pashure: Nyowani Mhepo Disinfection Bhokisi reHVAC Sisitimu
Zvadaro: Maindasitiri Akabatanidzwa Mhepo Kubata Units